Teknika 5 hamelomana ny mailakao | Martech Zone
Teknika 5 hamelomana ny mailakao
Alakamisy, May 9, 2013 Wednesday, May 8, 2013 Douglas Karr
Miaraka amin'ny 68% amin'ny mailaka rehetra dia SPAM, tsy sarotra ihany ny mitondra ny mailaka mankany amin'ny boaty, ny famohana azy ary ny atiny voatsindry dia mitaky fifantohana kely. Ny fampiasana ny atiny mailaka mivantana dia mety ho tetika mametraka ny mailakao ho ambony.
Ny fampidirana atiny mailaka mivantana izay zatra amin'ny fotoana tena izy dia lakilen'ny fanaterana fampahalalana mifandraika amin'ireo mpamandrika amin'ny fotoana mety. Ao amin'ny infographic eto ambany izahay dia mizara karazana atiny mailaka mivantana dimy sy ny fomba fampidirana azy ireo amin'ny fampielezana mailaka manaraka. Avy amin'ny Lyris Infographic, Votoatin'ny mailaka mivantana: teknika 5 hamelomana ny mailakao.
Ny mpamaky isa, ny kendrena eo amin'ny toerana, ny kendrena amin'ny fitaovana, ny fanatsarana sary ary ny toetr'andro dia mety ho singa manampy ny mailaka hisongadinan'ny mailakao.
Tags: Timer Countdownkendrena fitaovanamailakainfographic mailakamailaka Marketinginfographic marketing amin'ny mailakapaikady marketing amin'ny mailakaimage optimizationlive contentatiny mailaka mivantanatoerana kendrenalyrisWeather
Maninona no mila fampiharana ny orinasanao
Conversocial: zotra ny serivisy ho an'ny mpanjifa haino aman-jery sosialy